IZIMPAWU ZOKWENZA IZIMPAHLA ZOKUPHULALA Abahlinzeki kanye neFektri - China IZICWANGCI ZOKWENZA IZINTO ZOKUPHULULA Abakhiqizi
Zonke izinhlobo ze-JHD extruder zisetshenziswa kakhulu ku-PVC, PE, PP, PS, ABS, PA, PMMA, PET njll. Ziphethe isikhunta efanelekile futhi Equipments esezansi, le extruder angakhiqiza plastic ishidi, ifilimu, iphrofayli, ipayipi njll imikhiqizo. Isikulufa extruder esisodwa singasetshenziswa futhi emkhakheni wokuthambisa.
I-JHD Single screw extruder enokwakheka okusha okuvuselelwe ekubukeni, uhlelo lukagesi, ifreyimu eqinile .Izosebenza ngokusebenza kahle kakhulu nokonga amandla.
I-soulution eyenziwe ngokwezifiso ihlala itholakala kuzinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene, ukuphatha izinto ezahlukahlukene zepulasitiki.
Zonke izinhlobo ze-JHZ extruders inkampani yethu eyiklama ikakhulukazi ukukhiqiza iphrofayili ye-PVC / WPC ne-PVC ipayipi eline-plasticity, ikhwalithi engaguquki, ukukhiqizwa okuphezulu, ukusetshenziswa okubanzi nokuqina isikhathi eside. Iwele eliyindilinga le-screw extruder umshini unezinketho ezimbili ekulawuleni imitha okuvamile nasistimu yokulawula ikhompyutha nezinketho ezimbili zohlelo lwemoto oluqhutshwa yi-DC ne-AC.
Zonke izinhlobo ze-JHP parallel twin screw extruders inkampani yethu eyiklama ikakhulukazi ukukhiqiza i-SPC / LVT flooring ne-PVC pipe ne-PVC pelletizing nge-plasticity, ikhwalithi engaguquki, ukukhiqizwa okuphezulu, ukusetshenziswa okubanzi nokuqina okude. Parallel twin isikulufa extruder umshini unezinto ezimbili ongakhetha kuzo kumitha ejwayelekile yokulawula nohlelo lokulawula ikhompyutha kanye nezinketho ezimbili ze-DC ne-AC eqhutshwa uhlelo lwemoto.
I-co-extruder iyingxenye ebalulekile yobuchwepheshe be-co-extrusion. It is ngokukhethekile zenzelwe ukujwayela ukuhamba okuncane kwe-co-extrusion futhi ukwazi ukuxhumana nezinhlobo ezahlukahlukene zababungazi.
Umehluko wesakhiwo phakathi kwe-co-extruder ne-extruder ejwayelekile ikakhulukazi ekwakhiweni kohlaka. Ngokwefreyimu ehlukile, i-co-extruder ingahlukaniswa ngezinhlobo ezimbili: uhlobo lwangaphandle nohlobo oluku-inthanethi. Ama-co-extruders angaphandle angahlukaniswa abe ngama-co-extruders amile, avundlile nama-angular ngokuya ngezikhundla ezahlukahlukene zokufaka; ama-co-extruders aku-inthanethi abekwa kwi-extruder enkulu abekwe etafuleni lokubeka. Iminithi. I-co-extruder inezici ezilandelayo:
Isakhiwo esihlanganisiwe nendawo encane yaphansi;
SystemSmall control system, kulula ukusebenza;
FrameUzimele weselula, ukuqaqa kalula nokulungisa;
Isibonisi somgijimi weHandy, ukuguquguquka okuqinile.
ICo- Extruder nayo ithole amamodeli ahlukile afana nesikulufa esisodwa nesikulufu esiphindwe kabili.
Njengama-35, 45, 50, 55,60,70,80,90 single extruders
45,55,65,80,92 kabili isikulufa extruders